Ihowuliseyili Cylinder iibhotile zeplastiki yoMvelisi kunye noMthengisi | ICopak
Isilinda iplastiki Iibhotile zibhotile ezinde nezimxinwa, ezifanayo neebhotile zeBullet, kodwa zinamacala amabini (ngamanye amaxesha zine-taper encinci) kunye namacala athe tye anika indawo ende yokuhombisa. Ukuvulwa kwebhotile kunciphile kunenye ibhotile.
Iibhotile zeplastikhi zesilinda Zenziwe ngePET.PET iplastiki inezinto ezinjengokuqina, ukucaca okuhle, isithintelo sokufuma esifanelekileyo, kwaye ithande ukuba nefuthe ekumelaneni.
Izikhokelo zebhotile zePET zibonisa ukhetho lwethu lweebhotile zeplastiki zePET ezikhoyo kukhetho lwakho lwezitayile; Imijikelezo yeCosmo, imijikelezo yase-boston, imijikelezo yomlomo ebanzi, iibhotile zesilinda, iioyali zeplastiki kunye neebhotile zesikwere Ezi Isilinda iibhotile zeplastiki ziyafumaneka ngemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu. Skrolela ezantsi ukukhetha ibhotile efanelekileyo ngokufanelekileyo kwiimfuno zakho kwaye uzive ukhululekile ukukhetha ukuvalwa okuhambelana nokwandisa ukusetyenziswa okunokwenzeka kwezi bhotile zeplastiki.
Siyathwala isilinda iibhotile zeplastiki imibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu.Kodwa sivelisa kuphela iibhotile ze-PET zephakeji yokutya. Inkqubo ye-Ibhotile yesilindas ziyilelwe ukupakisha ijusi, ikofu, ubisi, iti, iti ye-boba, iziselo njalo njalo. Zilungile kwiziselo ezibandayo.
Q1. Ngaba singafumana iisampulu kuwe?
A: Ewe. Imigaqo yethu yenkampani yeesampulu ngolu hlobo lulandelayo, Iisampulu zinokufumaneka simahla kuwe. Kodwa abathengi kufuneka bathwale iindleko zokuhambisa. Kuya kuba ngcono ukuba uneakhawunti ye-DHL okanye ye-TNT.
Umbuzo Ngaba kulungile ukuprinta ilogo yam kwiitoti zePET?
A: Ewe. Inkonzo yokuphawula nokushicilela iyafumaneka.
I-Q3: Ngaba ndingenza ngokwezifiso iitoti zam zePET?
A: Ewe, sinikezela ngenkonzo yokwenza ulungiselelo lweemilo zebhotile.
I-Q4: Ngaba ndingayila iitoti zam ze-PET?
A: Ewe, inkonzo yokwenza ngokwezifiso iyafumaneka kuyilo lwebhotile.
Yenza iNtshukumo kwiCOPAK'S PET Beans Cans
Sinikezela ngenkxaso yezobuchwephesha, iingcebiso zokuthunga kunye nokuphicothwa kwemali ukuqinisekisa ukuba usebenza ngokusebenza okuphezulu.
Egqithileyo Iibhotile zePET ezenziwe ngokwezifiso
Okulandelayo: Ezilahlwayo PET iibhotile
Iibhotile zePET zebanga lokutya
I-BPA iibhotile zePlastiki zasimahla
Sula iibhotile zeplastiki